DR Z Aesthetics, Laser & Skincare | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
DR Z Aesthetics, Laser & Skincare | Sanchaung
DR Z Aesthetics, Laser & Skincare
Dental Care / Beauty Others
DR Z Aesthetics, Laser & Skincare ဆိုင်လေးသည် နံပါတ် ၁၀၅ ၊ ကျွန်းတောလမ်း ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် တွင် တည်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့ မှာဆိုရင် ဆိုင်ခွဲ နှစ်ဆိုင် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆိုင်ခွဲ တစ်ခုသည် နံပါတ် ၄၃ (အေ) ၊ သီရိမင်္ဂလာ ၂လမ်း ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် တွင် တည်ရှိပါသည်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်လေးကတော့ မနက် ၁၀နာရီ မှ စတင်ဖွင့်လှစ်ကာ ည ၈နာရီ ထိ ပိတ်ရက်မရှိ နေ့စဉ် ဖွင့်လှစ်ပါသည်။ ဆိုင်အပြင်အဆင် အနေဖြင့် စတိုင်ကျရိုးရှင်းကာ ၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီး ၊ ဆိုင်အတွင်းတွင် အအေးခန်းတပ်ဆင်ထားကာ ကျယ်ကျယ် ၀န်းဝန်း နဲ့ ခေတ်မှီ လှပသော ဒီဇိုင်းများ ဖြင့် သေသေ ချာချာ ပြင်ဆင်ထား တာကြောင့် ဆိုင်အတွင်း ထဲကို ၀င်လိုက်တာနှင့် စိတ်ကြည်နူး မှုကို ရရှိ စေမှာ ဖြစ်ပါသည်။ DR Z Asethetics, Laser & Skincare ဆိုင်တွင် ရရှိနိုင်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေကတော့ ခွဲစိတ်ရန်မလိုသောမျက်နှာပုံသွင်းခြင်းများ ၊ မျက်နှာနှင့်မေးနှစ်ထပ်အဆီချခြင်း ၊ မျက်နှာသွယ်လျစေခြင်း ၊ မျက်နှာ V Line ပုံဖော်ခြင်း ၊ မေးစေ့ပုံသွင်းခြင်း ၊ နှာတံပုံသွင်းခြင်း ၊ နှုတ်ခမ်းပုံသွင်းခြင်း ၊ အသားအရေ၀င်းပစေခြင်း ၊ မျိုးဗီဇဆဲ(လ်)ဖြင့် ပြန်လည်နုပျိုစေခြင်း ၊ အရေးအကြောင်းကင်းစေခြင်း ၊ မျက်နှာပင့်တင့်ခြင်း ၊ အသားအရေအားဖြည့်ပေးခြင်း ၊ အသားအရေကြည်လင်စေခြင်း ၊ ဆေးထိုးရန်မလို ၊ ခွဲစိတ်ရန်မလိုဘဲအထူးနည်းပညာဖြင့်အဆီပိုများကို အေးခဲအောင်ပြုလုပ်၍ချေဖျက်ပေးခြင်း ၊ ချေဖျက်ထားသော အဆီများကို တစ်ပတ်မှ တစ်လအတွင်း စွန့်ထုတ်ပေးပြီး ဗိုက်ခေါက်နှင့် အခြားအဆီပိုနေရာများကို ချပ်စေပါသည်။ နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြင့် နည်းပညာဖြင့် အရေပြားအောက်ရှိအလွှာများအထိကုသမှုပေးပြီး အရွယ်တင်နုပျိုအောင် ပြောင်းလဲပေးခြင်း ၊ ခွဲစိတ်ရန်မလို ၊ ကြိုးထည့်ရန်မလို ၊ ပြုလုပ်မှုအပြီး နာကျင်ယောင်ယမ်းခြင်းမရှိ ၊ တစ်လတစ်ကြိမ်ဖြင့် သုံးကြိမ်ပြုလုပ်ပြီးပါက ၅နှစ်မှ၁၀နှစ်ခန့်အထိ နုပျိုစေပါသည်။ ၀က်ခြံကုထုံး ၊ တင်းတိပ်အမဲစက်ကုထုံး ၊ အသားအရေ၀င်းပစေသောကုထုံး ၊ အသားအရေတင်းရင်းစေသောကုထုံး ၊ အရွယ်တင်နုပျိုစသောကုထုံး ၊ Crystal ကုထုံး ၊ ဗီတာမင်ဖြည့်သွင်းပေးသောကုထုံး ၊ အဆင်မြင့် Golden ကုထုံး ၊ ၀က်ခြံအလင်းရောင်ကုထုံး ၊ တင်းတိပ်၊ အမဲစက် အလင်းရောင်ကုထုံး ၊ အသားအရေ၀င်းပစေသော အလင်းရောင်ကုထုံး ၊ အသားအရေတင်းရင်းစေသောလေဆာ ၊ အမွှေးအမျှင်များဖယ်ရျားပေးသောလေဆာ ၊ ချေါးပေါက်ကျဉ်းစေသောလေဆာ ၊ ချိုင့်ခွက်များသက်သာစေသောလေဆာ ၊ မှဲ့ခြောက်အသားပိုများဖယ်ရှာပေးသော လေဆာ တို့ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်တွင် အခြားသော အလှပြင်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဆိုင်သည် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးပစ္စည်းများကိုသာ ဧည့်သည်များအတွက် သုံးစွဲပေးပါသည်။ DR Z Aesthetics, Laser & Skincare ဆိုင် သည် အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေးပြသနာအမျိုးမျိုးကို အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ခေတ်မီစက်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုကာ ကျွမ်းကျင် ဆရာဝန်များကိုယ်တိုင် စနစ်တကျ စစ်ဆေးကုသမှုများပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ နေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါသည်။
Dental Care | Beauty Others
10:00 AM - 08:00 PM ( ဘာမှမရှိပါ )
No.105, Kyun Taw Road and Sanchaung Township
အနီးအနား မဟာမြိုင် မှတ်တိုင်5မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
DR Z Aesthetics, Laser & Skincare is located at No.105, Kyun Taw Road and Sanchaung Township. They have two branches in Yangon, another one is located at No.43 (A), Thirimingalar2Street and Kamayut Township. The opening hour of the shop is from 10 AM to 8 PM and the shop is opened daily. The shop decoration is simple stylish, clean, air conditioned inside, spacious and beautifully decorated withamodern stylish. DR Z Aesthetics, Laser & Skincare is mainly provide NON-SURGICAL FACIAL SHAPING, Lip dissolve, Face Slimming, V-Shaped Face, Chin Shaping, Nose Shaping, Lips Shaping, Snow White Infusion, Stem Cell Rejuvenation, Wrinkle Correction, Face lifting, Collagen Injection, Brightening Injection, CryoSlim (CryoLipolysis), Ultra former ( Makes 5-10 years younger), Acne Treatment, Pigment Treatment, Brightening Treatment, Tightening Treatment, Ant aging Treatment, Crystal Treatment, Vitamins Treatment and Golden Treatment and also available Acne Light Therapy, Pigment Light Therapy, Brightening Light Therapy, Tightening Laser, Hair Removal Laser, Pores Reduction laser, Scar Repair laser and Smart Resurfacing Laser. They have variety kinds of Skin Care, Whitening/ Ant aging Professional Set. They only use high quality items for customers. DR Z isaplace where beauty and health related problems can be assessed and be treated by professional doctors using apparatuses of late technology.
Creative Zone Nail & Spa
Gucci Aung Hair & Make Up Artist
The Gym City ( Sanchaung )
Hong Fa Beauty Salon (Pathein Street)